Isoyikiso esitsha kwimfihlo yethu: ii-headphone | IPhone iindaba
Njengoko amakhaya ethu egcwalisa "izinto ezintle," izoyikiso ziyanda xa kuziwa kukhuseleko nakubucala. Kutshanje, iiwebhusayithi eziphambili zesiqingatha sehlabathi ziye zawa ngenxa yolo hlaselo kusetyenziswa iikhamera zokujonga kwi-intanethi, njengaye uninzi lwenu kuya kufuneka lubeke esweni ukulala kweentsana zakho, kwaye ubone isiqwenga seteyipu emnyama sibekwe Ikhamera yewebhu yekhompyuter ngoku iphantse yaqheleka kwiinkampani nakumakhaya amaninzi. Into yokuba siya siqhakamshelana ngakumbi ichaza ukonyuka kohlaselo olunokwenzeka ngokuchasene nathi, kwaye Isoyikiso samva nje sinokuvela kwinto elula njengee-headphone.
Andithethi ngee-headphones ezingaphezulu okanye ezingaphantsi ngemakrofoni esetyenziselwa ii-smartphones, kodwa kunokuba zilula ii-headphone, uhlobo olusetyenziselwa ukumamela umculo ngaphandle kwemakrofoni eyakhelweyo kodwa enokuguqulwa yisoftware ukuze ibambe eyethu ngaphandle kwethu. masiyiqonde. Ingenzeka njani loo nto? Kulula kakhulu, nayiphi na i-headphone inokusetyenziswa njengemakrofoni, umgangatho weaudio awulunganga, kodwa ungaphezulu ngokwaneleyo, kwaye kuya kufuneka uyixhume kwigalelo le-mic endaweni yesiphumo sokumamela ukuyifumana. Abaphandi bakwazile ukuguqula iikhowudi zeRealTek, ezikhoyo kwinxalenye enkulu yeePC kwihlabathi liphela, kwaye ujike into ephuma kwisandi ungene kwigalelo lemakrofoni, apho ii-headphone ezixhumeneyo ziya kubamba zonke iincoko zethu.
Olu luvavanyo olwenziwe liqela lophando, hayi isoyikiso sokwenyani, kwaye ngoku njengokuba kusaziwa, masithembe ukuba abo banoxanduva lweRealTek bazokwehla basebenze kwaye balungise le mpazamo yezokhuseleko, kodwa inyani elula yokuba ukuba kuyenzeka, isaphazamisa njengokubamba yonke into eyenzekayo phambi kwekhompyuter yakho ngokugqobhoza ikhamera yakho yewebhu. Ngelixa kungekho sisombululo, kungcono ukhuphe ii-headphone xa ungazisebenzisi. Okwangoku iimvavanyo zenziwe kuphela kwiikhompyuter kunye neRealtek codec, kodwa ayinakugwetywa ngaphandle kokuba iipilisi kunye nee-smartphones zinokubandezeleka ngokufana.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Isoyikiso esitsha kwimfihlo yethu: ii-headphone
UToni Lara Perez sitsho
Njengomntwana ndikhumbula ndicofa kakhulu "izinto" kwi-headphone jack yekhasethi endala yerediyo. Ukusuka kwii-headphone (ezirekhodishe ngokufanelekileyo ilizwi kwikhasethi ngaphandle kwengxaki nangona zinomgangatho ophantsi kakhulu) kwizithethi ezingenaso isandisi-lizwi (ezazicinga ukuba zikhulu, ziya kurekhoda ngcono; kwaye hayi, zimbi nje). Ngapha koko, kungekudala kwakude kudala emsebenzini bekhangela imakrofoni yokwenza iSkype, kwaye ndibothuse besithi bangasebenzisa iseti yentloko engcolileyo ukuphuma kwingxaki yeXD
Into endandiza kuya kuyo. Ngale nto ndiyathetha ukuba umqhubi weRealtek angagqogqwa ukuze atshintshe i- «headphone output» ukuya «kwimakrofoni yokufaka» (*), kwaye ukuba into edityanisiweyo kukho izithethi eziqhelekileyo ngaphandle kwesandisi (umzekelo ezo zifakwe ukubeka iliso, okanye ibha yesandi yaseTshayina, njl.njl.
(*) Kwaye oku kufuneka kube sisiphumo sokuvumela isoftware ukuba itshintshe okwenziwa zizidibanisi zamakhadi wesandi, adityanisiweyo okanye hayi, ukufezekisa, umzekelo, utshintshe ubumbeko lwesithethi lube ngu-2.1, 4.1, 5.1, njl. kwaye utshintshe okwenzekayo xa kukho into exhunywe ngaphambili kwinqaba okanye kwizidibanisi ezingasemva. Into ehlekisayo kukuba kwiminyaka emininzi kangaka le nto isebenze ngoluhlobo, akukho namnye umntu owake wayicinga ngaphambili ... okanye ayikabonakali kude kube ngoku.
Phendula Toni Lara Pérez
Ayisiyongxaki le. Ndiyi-DJ kwaye amaxesha amaninzi xa ndisiya kumagumbi ndiyodlala engenayo imakrofoni, into endiyenzileyo yayikukuqhagamshela uSennheiser wam kwigalelo lemakrofoni kwaye ndithethe ngefowuni, ngokungathi yimakrofoni. Ngokucacileyo ayivakali ilungile, kodwa iyavakala 🙂
Umenzi wewotshi ezimbini sitsho
Makhe sibone ... Ukuba sele unalo ufikelelo sihlikihliwe kunjalo.
Phendula kuMlindi weDosPuntoZero
Le yimifanekiso yamva nje yeCampus 2 ka-Apple esakhiwayo